Ukuveliswa kwesityalo somdiliya we-paddy irayisi kunye nokulungisa irayisi etyheli
1.Esi sityalo sigcweleyo sokuvelisa irayisi ngumatshini ofanelekileyo wokulungisa ukutya okuziinkozo kwimizi-mveliso eliphakathi nelincinci yokulungisa irayisi
2.Ukuphakamisa irayisi ngokuzenzekelayo,umgangatho ovunyiweyo welinye ilizwe
3.Izinga elaphukileyo lisezantsi xa kusetyenzwa kwaye ulusu lwerayisi lungasuswa ngokucocekileyo
4.Ukwahlula irayisi ecocekileyo evela kumxube weenkozo ezimbi, amabele amdaka kunye nerayisi emdaka
Iinkcukacha zemveliso ze-15T / D umatshini wokuvelisa irayisi
Uhlobo lwe-VTLN15 lokuvelisa imveliso yokugaya irayisi siseti epheleleyo yezixhobo zokugaya irayisi,edityaniswe ne paddy destomer, Ukususa uthuli, Ukususwa kwelitye, ukugaya irayisi kunye nepolishi. Imveliso yokuvelisa irayisi ye Paddy irayisi enemveliso elungileyo yokususa ilitye, isantya sokuqhekezwa kwegobolondo kunye nemveliso elungileyo yokwahlula ukutya okuziinkozo. Esi sisityalo sokwenza irayisi ngomatshini omncinci, Ukusebenza okulula kunye nokukhutshelwa ngokukhawuleza kwerayisi.Isixhobo sokulungisa irayisi paddy sinekristali ecacileyo yokuhamba, isantya sokudibana kwesikrini sogreyito kunye ne-gravel sise screen surface.Iimpawu kunye nezinye iimpawu.
Lo mzi-mveliso wokuphelisa irayisi uxhotywe ngomatshini wokucoca,umatshini wokugaya irayisi,umatshini wearayisi wesiza njl,kwaye inemveliso enkulu, indawo encinci yonyawo, ulungelelwaniso, Ukusebenza okulula njl .paddy irayisi yokulungisa isityalo inokuhlangabezana neemfuno zamashishini amancinci kunye aphakathi nendawo yokugaya irayisi,Indawo yemveliso epheleleyo yerayisi ikwindawo efanelekileyo yophawu lwangoku, Imveliso yeenkampani ezinkulu zerayisi.
Amanqaku esityalo esipheleleyo semveliso yerayisi
1.Ngokuzenzekelayo uzalise umatshini wokuvelisa irayisi, ukusetyenziswa kwamandla kancinci.
2 Ukusebenza okulula, Yonke imisebenzi inokuqhutywa ngumntu omnye.
3.Umatshini wokulungisa umatshini weeraddy irayisi uqala ngoyilo lobugcisa kunye nobuchwephesha bokuhambisa obusebenza kakuhle,ezibonelela ngokusebenza okungaginyisi mathe ngokusebenza ubuncinci.
4.Matching umatshini wokushicilela, Abasebenzisi banokuguqula bumhlophe irayisi emhlophe yerayisi eyahlukileyo, ukunciphisa izinga lokuphuka kwerayisi egqityiweyo kunye nokwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zenkqubo yokucoca irayisi.
5. Irayisi egqityiweyo ingagcinwa ngokuthe ngqo ukunciphisa ukubanzima.
6.Sisisilungisi sokuvelisa izixhobo zerayisi esipheleleyo esinamava atyebileyo ekwakheni isixhobo sokuphanda irayisi kumazwe aphesheya ngempumelelo, kwaye safumana udumo oluphezulu kubathengi bethu ngomgangatho olungileyo, elona xabiso liphezulu kunye nenkxaso yobuchule.
Oomatshini besixhobo sokulungisa irayisi
Lo mzi-mveliso wokulungisa iilayisi opheleleyo uxhotywe ngesixhobo sokuzondla esizenzekelayo, ukucoca i-sieve, umatshini wokwahlula amatye, i-iron roller paddy husker, khumbula ukohlukana, isisosi esijikelezayo sedrafti kunye nerayisi e-brown eyahlulahlula, umatshini wokugaya intsimbi, umatshini wokucoca i-iron roller polishing, umatshini wokuqhekeza irayisi, ikhabhathi yokulawula umbane, Lo mveliso wokuvelisa irayisi we-paddy unakho nokuxhobisela ikhrayusi ekhethekileyo.
Ipharamitha yobugcisa besityalo esipheleleyo semveliso yerayisi
Imodeli yeMveliso: VTLN15
Nika amandla ombane: 380V
Inkqubo yokuqhuba: 700-800IKg / h
Ububanzi ngokubanzi (ubude * ububanzi * ukuphakama): 5000*2000*2900mm
Izinto ezisetyenziswayo: irayisi ende emile ,ijikeleze imilo yerayisi,Millet
ividiyo yesityalo sokulungisa irayisi
Nxibelelana nathi malunga nesityalo sokuvelisa umbila we-15T / D